Ababoneleli beZigcina-mveliso kunye neFactory - Abavelisi baseTshayina abaGcinwayo
IMveliso eNtsha yoMgangatho oPhezulu weXabiso eliPhezulu le-Benzoic Acid
Igama lemveliso: Benzoic Acid
Inombolo yeCAS: 65-85-0
Iphakheji: 25kg / isikhwama
Ugcino:Ivalwe kude nokukhanya, igcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo, nengena umoya.
Isetyenziselwa amayeza, abathwali bedayi, plasticizer, iziqholo, kunye nezigcina ukutya kunye nezinye imveliso, ikwasetyenziswa alkyd resin coating uphuculo performanceanc.
Ukutya kwiBanga leCalcium Propionate
Igama lemveliso:I-Calcium Propionate
Ugcino:Itywinwe kude nokukhanya, igcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo, nengena umoya
Beka ubomi kwishelufa:iminyaka eyi-2
1) Ingasetyenziswa njengesithinteli sokungunda, isigcinakaliso kunye nesibulala-ntsholongwane.
2)Isetyenziswa kakhulu ekutyeni, kwicuba nakwishishini lamayeza.
3) Inokusetyenziswa kwakhona kwirabha ye-butyl ukuthintela ukuguga kunye nokwandisa ubomi benkonzo.
4) Isetyenziswa kwisonka, ikhekhe, ijeli, ijam, isiselo kunye nesosi.
ibakala lokutya sodium diacetate 126-96-5
Igama lemveliso:sodium diacetate
Igranule emhlophe yekristale okanye umgubo;Nge-acetic acid ivumba.I-Deliquescent;I-soluble kakhulu emanzini (1g / ml), kwaye yenza i-acetic acid kunye ne-42.25%.Ixabiso le-PH yesisombululo samanzi kunye ne-10% phakathi kwe-4.5 kunye ne-5.0.Izakwaphulwa xa ishushubezwa ukuya kutsho kwi-150 ℃.Ukutsha.Isicelo: Isetyenziswa njengesigcini, isithinteli sokungunda, isilawuli se-asidi, iarhente yencasa yezondlo, isibulali-zintsholongwane kunye nearhente etshisayo.
Ixabiso elingcono kakhulu leSorbic Acid Food Preservative
Igama lemveliso:I-Sorbic Acid
I-asidi ye-Sorbic yi-preservative esebenzayo kwaye ekhuselekileyo ye-antiseptic ekhuthazwa yi-FAO kunye ne-WHO.Isetyenziswa kakhulu kukutya, isiselo, icuba, i-pesticide, izithambiso kunye namanye amashishini.Isenokusetyenziswa njenge-asidi engaxutywanga kwi-resin, i-perfume kunye namashishini erabha.
IziKhuseli eziKhuselekileyo ze-BP yeBanga le-Sodium Benzoate Powder/Granular
Igama lemveliso: sodium benzoate Powder / Granular
Ifomula yemolekyuli: C7H5NaO2
Ubunzima beMolekyuli: 122.1214
Iimpawu zomzimba kunye neekhemikhali: ikristale emhlophe okanye engenambala yeprismatic, okanye umgubo omhlophe.Ukuxinana kobudlelwane yi-1.44.Inyibilika emanzini.
Ukupakisha: ukupakisha kwangaphakathi yifilimu ye-polyethylene, ukupakisha kwangaphandle yi-polypropylene isikhwama esilukiweyo.Net ubunzima 25 kg.
Ugcino: Indawo engena umoya neyomileyo, kude nelanga, kude nomlilo ovulekileyo.
Ukusetyenziswa: i-preservative, i-antimicrobial agent.
Umgangatho ophezulu wezongezo zokutya Disodium EDTA 2Na
Igama lemveliso:I-Disodium EDTA 2Na
Inombolo yeCAS: 6381-92-6
I-EDTA-2Na isetyenziswa kwisicoci, isepha elulwelo, ishampu, iikhemikhali zezolimo, isisombululo sokulungisa ifilimu yombala, isicoci samanzi, isilungisi sePH.Xa uchaza ukusabela kwe-redox kwi-polymerization yerabha ye-butyl benzene, isetyenziswa njengenxalenye ye-activator yokudityaniswa kwe-ion yesinyithi kunye nokulawulwa kwesantya se-polymerization.
Ukucoceka okuphezulu 99% I-Sodium acetate anhydrous
Igama lemveliso:I-acetate yesodium engenamanzi
I-acetate yesodium isetyenziselwa ukuncedisa umthombo wekhabhoni kwinkqubo yokucoca amanzi amdaka.
Ukongeza umthombo wekhabhoni unokuphucula amandla e-microorganism ukususa i-ammonium nitrate kwinqanaba le-anoxic, ukuphucula i-denitrification kunye nokususa i-ammonia nitrogen.
Kwimeko yomthombo wekhabhoni eyaneleyo, i-phosphorus eqokelela i-microorganisms iya kuqhubeka ithatha i-phosphorus emanzini kwi-anoxicstage, iqhubekisela phambili ukususwa kwe-biological phosphorus, kunye nokugcina iindleko zokususwa kwe-phosphorus ukwenzela ukulandelwa.
Umgangatho ophezulu welactate yesodium enexabiso eliphezulu elivela eTshayina
Igama lemveliso:ISodium Lactate
Isetyenziswa kakhulu kwimveliso yokutya, ishishini lamayeza kunye neshishini lezithambiso njengohlobo lokugcinwa kunye ne-asidi umlawuli.
Lutein Guard, Lutein okuziinkozo, I-Lutein Yamehlo Omileyo, Monk Fruit Erythritol, Lutein Retina, Monk Fruit Cena,